Ny HomePod dia mety hampidi-doza ny fiainanao manokana | Avy amin'ny mac aho
Ny tsikera voalohany momba ny mpandahateny mifandray amin'i Apple dia efa eny amin'ny rivotra. Ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra dia fiderana ho an'ny ekipa Cupertino vaovao. Na izany aza, tonga ao aminay ny The Verge sy ny lehiben'ny tonian-dahatsoratra Nilay Patel fanamarihana heverinay fa mety hahaliana anao sy ny fiainanao manokana.
Fantatray tsara fa ny HomePod dia ekipa iray izay te hampifaly anao amin'ny mozika na feo amin'ny ankapobeny. mihitsy David pogue vao haingana dia nampitaha ity mpandahateny ity tamin'ny fifaninanana mivantana sy ny maodely sasany izay azo vidiana androany dia toa "baoritra" amin'ny tenin'ny mpanoratra azy ihany. Ankehitriny, rehefa afaka namakafaka ny HomePod, Patel dia nanome fanamarihana tena lehibe ary misy ifandraisany amin'ny tsiambaratelon'ny iPhone anao.
Raha efa nianatra tamin'ny antsipiriany momba izay rehetra azonao atao amin'ny mpandahateny mifandray ianao - mitandrema fa tsy azontsika antsoina hoe Bluetooth izy ity - ho fantatrao fa hisy fihetsika azonao atao amin'ny iPhone azonao atao amin'ny HomePod misaotra an'i Siri. Ho fantatrao koa fa ny olona isan-karazany eo amin'ny manodidina anao dia ho afaka hampiasa ilay mpandahateny isaky ny maniry izy ireo. Na izany aza, Ny olana dia toa tsy mahalala feo tsara i Siri ary mety hiditra amin'ny fitaovanao hamaky hafatra, mailaka, hamorona lisitra sns..
Araka ny ny tantara avy any Nilay Patel, namaky mafy ny hafatra tao amin'ny efitranony i Siri teo imason'olona. Toy izany koa azo atao ny mamitaka an'i Siri ary manao ny mpampiasa hafa hiditra amin'ny mombamomba anao tsy misy olana; Ny hany zavatra tokony ho ny HomePod sy ny iPhone mifandray amin'ny tambajotra WiFi iray ihany.
Ankehitriny, toa hita eo amin'ny fikirana sy ny fikirakira eo am-piandohana daholo izany. Misy safidy iray hanontany anao ireto manaraka ireto: "Ahafahan'olona mampiasa an'ity HomePod ity handefa sy hamaky hafatra, hanampy fampahatsiahivana, hamorona naoty ary maro hafa amin'ity iPhone ity rehefa mifandray amin'ny tambajotra WiFi iray ihany". Raha manaiky ianao dia ho sarotra aminao ny miaro ny fiainanao manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Ny HomePod dia mety hampidi-doza ny fiainanao manokana, amin'izao fotoana izao